टाउको नै नझुकाई क्षमा माँग्ने नेता
बाबुराम भट्टराई, जसले टाउको नै नझुकाई गोरखाको पालुङटार पुगेर विगतका गल्ती कमजोरीबारे जनतासँग माफी मागेका छन् ।
जनयुद्धमा मान्छे मारिए, क्षमा चाहन्छु । नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यतिबेला आएर किन माफी माँगेका होलान् ? उनले शान्ति प्रकृयामा आउँदा, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्दा माफी माँगेनन्, अहिले सडकमा आएपछि माफी माँग्ने ? केका लागि ?
जनताले माओवादी नेतृत्वलाई क्षमादान दिइसकेका छन् । त्यसैले त परिवर्तनका लागि माओवादी पटक पटक सत्तामा पुगेको हो । तर माओवादीले आफूलाई टाटबाट सम्पन्न बनाए, जनतालाई लथालिङ्ग छाडिदिए । २०६३ सालदेखि सत्तामा पुगेको माओवादी नेतृत्वले माफी मागेको छैन, प्रचण्ड अझै ठाडो शीर लगाएर सत्ताधारी बनेकै छन्, सडकमा पुगेका बाबुरामले ०७५ सालमा आएर माफी माँगे । तत्कालीन सिंगो माओवादी नेतृत्व पंक्तिले माफी माँग्नु पर्दैन ?
बाबुरामले देशबासीसँग होइन, पालुङटारबासीसँग माफी माँगे । यद्यपि उनले यतिबेला त्याग र बलिदानबाट राजतन्त्र हटेर देशसंघीय गणतान्त्रिक बनेको उपलव्धि पनि देखाए । संघीय गणतन्त्र आएर जनताले के पाए, त्यो भने बाबुरामले देखाउन सकेनन् । उनका शव्दमा– जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता परिवारजन, घाइते सबैप्रति म सधैं नतमस्तक रहन्छु, जनयुद्धको राजनीतिक नेतृत्व लिएकोमा मलाई गर्व छ । कैयौं मान्छेको ज्यान गयो त्यसमा दुःख छ। मारिनु नपर्ने साथीहरू मारिनुभयो । अत्यन्त दुःख छ, म क्षमायाचना गर्न चाहन्छु ।
यो अवसरमा बाबुरामले राजनीति निर्मम हुने कुरा बताए । सत्ता कूशासनविरुद्ध किन निर्मम तरिकाले चलाउन सकेनन्, त्यो भने खुलस्त पारेनन् । उनका अनुसार उनले नयाँ तरिकाले संघर्ष जारी राखेका छन् रे । अचम्म छ, अझै संघर्ष ?
विध्वंश नभई निर्माण हुन्न होला । विध्वंश त हुनसम्म भइसक्यो । सबैभन्दा ठूलो विध्वंश चरित्रको भएको छ । चरित्र र देश निर्माण कहिले गर्ने हो कुन्नी ?